Ndị na-ahụ maka Semalt Ntuziaka Iji Block bọtịnụ maka weebụsaịtị na Darodar Bots
Ọtụtụ ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ achọpụtawo narodar.com na ngalaba ngalaba buttons-for-website.com na-egosi na akụkọ Google Analytics - damenuhren marken luxus. Ha na-ekwu dị ka ndị na-ezo aka na-ezipụ ọtụtụ okporo ụzọ. Ha anaghị emerụ saịtị ahụ, ma ọnụ ọgụgụ nke nleta ha na-enye na ebe nrụọrụ weebụ na-emetụta ụba ụgwọ na oge ejiri na ibe. Nsonaazụ bụ na Google search algorithm ga-emeso ya dịka okwu dị mma nakwa na ndị mmadụ anaghị achọta ihe ha na-achọ na saịtị ahụ. N'ihi ya, ha na-ebelata ogo ọchụchọ nke weebụsaịtị. O nwere ike ọ gaghị eyi ihe dị ukwuu maka nnukwu òtù, ma maka obere azụmahịa na ebe nrụọrụ weebụ, ọ nwere ike ime ma ọ bụ mebie ọrụ ya.
Alexander Peresunko, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Semalt , na-enye ebe a ụzọ ụfọdụ nwere ike isi edozi nsogbu a.
Ugwu abụọ ahụ na-aga azụ na saịtị nke yiri ka ọ bụ ihe ziri ezi. Darodar yiri ka ọ na-enye nchịkọta saịtị maka ndị ọrụ, ebe nchekwa bọtịnụ na-enye ohere ulo oru ohere ịkekọrịta URL ha site na ihe ndị dị ka + AddThis. Ọ bụ ebe ebe mbipụta ahụ dị ka ọ ga-akwụsị ọ bụ ezie na ebe ụfọdụ gosipụtara ebumnuche ọjọọ nke saịtị abụọ a. Darodar anọwo gburugburu karịa mkpokọta bọtịnụ, ma mepụta "botnet." A botnet bụ netwọk nke nje nje nwere nje virus bụ ndị bu n'uche imebi nchedo kọmputa. Ọ na-enye ndị na-agba ọsọ na ndị dị ha mkpa iji nwetaghachi ntinye n'ime usoro. Onye na-achịkwa botnet na-eduzi ọrụ nke netwọk ndị a.
botnet gụnyere ọtụtụ puku adreesị IP nke na-eme ka ọ sie ike igbochi crawler n'ụzọ gara nke ọma site na ntinye aha IP na nchịkọta. Ihe na-ekwu ugboro ugboro na eziokwu ahụ na bot na-aga n'ihu na-ebunye weebụsaịtị site na otu ma ọ bụ karịa na mmemme na nje na-agbanye. Soundfrost bụ otu ibudata ọrụ bara uru nke nwere nje ahụ.
Iji ígwè ọrụ..usoro txt iji gbochie mkpirisi-ma-web na darodar, dika onye ga-eji ndi ozo na ndi ozo, agagh adi irite ebe obu ihe nduzi na-adabere n'enye ndi mmadu aka. Ọ bụrụ na onye nwe ugbu a na-agba ọsọ Black Hat, ọrụ ha anaghị adabere na ntụziaka ịkwadoro.
Darodar bot nwere ọtụtụ ojiji. Otu n'ime ha bụ ịmepụta SEO nke saịtị site na-eduzi okporo ụzọ na saịtị ahụ. Nhazi ya dị n 'ụzọ nke na ọ naghị apụta dịka onye na-awagharị. Ọ dị ka ezigbo onye nleta na search engine s ga-agụnye ya na akụkọ ha, si otú ahụ na-eduga na skewness na nchịkọta data. A maara nke a dị ka njikọ spamming, ihe nke na-aghọchaghị ọrụ ọma n'ihi nwelite algorithm na-adịbeghị anya.
Wikipedia na-akọwa spamdexing ntinye aka na-egosi ntinye nke na-agụnye arịrịọ ugboro ugboro site na iji URL na-ezighị ezi na saịtị na spammer chọrọ ịkwasa. Ebe nrụọrụ ahụ na-ejikọta na saịtị na spammer nke na-edekọ dịka okporo ụzọ maka ha. Ọ bara uru ka spammer dị ka njikọ na-enweghị nnyema maka ịmepụta ọkwa ha.
Ọrụ ndị ọzọ nke botnets na-eje ozi bụ ọgụ mgbochi-nke-ọrụ, pịa aghụghọ, spamdexing, ohi ma ọ bụ ozi nkeonwe na ego, SMTP mail relays maka spam, na mining bitcoins. Dabere na nchọpụta ndị a, ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma iji nweta okporo ụzọ dị otú ahụ na weebụsaịtị.
bọtịnụ N'ihi weebụsaịtị nwere ọrụ yiri nke ahụ, naanị na nnyefe ya dịtụ iche. Ọ na-enye ngwá ọrụ dị oke aka maka weebụsaịtị. Oge onye nwe ya na-ebunye ya, ọ na-emepụta ọnụ ụzọ nke ndị mmadụ nwere ike iji wepụ ihe nchọgharị weebụ nke ndị ọbịa na saịtị ha.
bọtịnụ mkpọchi maka weebụsaịtị na Darodar
Nhọrọ iji gbochie bọtịnụ bọtịnụ na ebe darodar site n'iji mgbazinye IP iji gbochie okporo ụzọ n'aka ha agaghị aga nke ọma. Ihe kpatara ya bụ na ha abụọ nwere ọtụtụ adreesị IP na-ebugharị ụgbọala na saịtị ahụ. Nhọrọ ọzọ bụ iji dezie faịlụ .htaccess nke nke ọ bụla n'ime ngalaba ndị a ma gbochie okporo ụzọ site n'ebe ahụ. Iji mee nke a, onye ga-enwerịrị ike ndekọ na web host nke na-eme ka saịtị WordPress. Jide n'aka iji usoro Apache nke ọtụtụ ndị na-enye ọrụ na-eji. Ọ bụrụ na onye ọ bụla enweghị ahụmahụ na-agbanwe faịlụ .htaccess, rịọ onye na-elekọta weebụ ka o nyere ya aka n'ihi na ọhụhụ ọ bụla nwere ike iduga nkwụsị nke saịtị ahụ dum.